Imiyalo yokusetshenziswa kwezidakamizwa, ama-analogues, izibuyekezo > Ukwelashwa nokuvimbela
Amathebulethi we-Augmentin, isixazululo, ukumiswa (125, 200, 400) ezinganeni nakubantu abadala - imiyalo yokusebenzisa nomthamo, i-analogues, ukubuyekezwa, intengo
Inombolo yokubhalisa: P N015030 / 05-031213
Igama lomkhiqizo: i-Augmentin®
Igama le-non-proprietary noma igama leqembu lamazwe omhlaba: amoxicillin + clavulanic acid
Ifomu lomthamo: amaphilisi athambile emafilimu.
Ukwenziwa komuthi (i-1 ithebhulethi)
Amoxicillin trihydrate ngokuya nge-amoxicillin 250.0 mg,
I-potasium clavulanate ngokuya nge-clavulanic acid 125.0 mg.
isisekelo sethebhulethi: isitashi se-magnesium, isitashi se-sodium carboxymethyl, i-colloidal silicon dioxide, i-cellcose ye-microcrystalline,
amaphilisi okuhlanganisa amafilimu: titanium dioxide, hypromellose (5 cP), hypromellose (15 cP), macrogol-4000, macrogol-6000, dimethicone.
Isilinganiso sezingxenye ezisebenzayo
Ifomu lomthamo Isilinganiso sezingxenye ezisebenzayo i-Amoxicillin, mg (ngesimo se-amoxicillin trihydrate) i-Clavulanic acid, mg (ngesimo se-potasium clavulanate)
Ithebhulethi 250 mg / 125 mg 2: 1 250 125
Amathebhulethi afakwe kumafilimu avela okuvela kokumhlophe kuya kokucishe kube mhlophe ngombala okubhalwe ukuthi "AUGMENTIN" ngakolunye uhlangothi. Amathebulethi asuka emhlophe aphuzi aze acishe abe mhlophe ekuqhekekeni.
I-antibiotic, i-penicillin semisynthetic + beta-lactamase inhibitor.
Ikhodi ye-ATX: J01CR02
I-Amoxicillin iyinhlangano elwa namagciwane angenasici-enobumbano ebanzi eyenziwe ngokulwa namagciwane amaningi angenazimpawu zegram kanye ne-gram-negative. Ngasikhathi sinye, i-amooticillin isengcupheni yokubhujiswa yi-beta-lactamases, futhi ngenxa yalokho i-spectrum yokusebenza kwe-amooticillin ayifikeleli kuma-microorganisms akhiqiza le enzyme.
I-Clavulanic acid, i-beta-lactamase inhibitor ehlelekile ngokwezakhiwo ze-penicillin, inamandla okwakha inqwaba yama-beta-lactamases atholakala kuma-penicillin nama-cephalosporin amelana nama-microorganisms. I-Clavulanic acid inokusebenza okwanele ngokumelene ne-plasmid beta-lactamases, evame ukunquma ukumelana kwamagciwane, futhi ingasebenzi ngokumelene nohlobo lwe-chromosomal beta-lactamases, olungavinjelwe yi-clavulanic acid.
Ukuba khona kwe-clavulanic acid kulungiselelo lwe-Augmentin® kuvikela i-amoxicillin ekubhujisweni ngama-enzyme - i-beta-lactamases, evumela ukwandisa isibuko se-antibacterial ye-amoxicillin.
Okulandelayo umsebenzi we-in vitro we-amooticillin nge-clavulanic acid.
Amagciwane asengozini yokuhlanganiswa kwe-amoxicillin ne-clavulanic acid
I-Streptococcus agalactiae 1.2
ISpreptococcus spp. (ezinye i-beta hemolytic streptococci) 1,2
Staphylococcus aureus (methicillin ebucayi) 1
I-Staphylococcus saprophyticus (methicillin ebucayi)
I-Coagulase-negative staphylococci (ethinta i-methicillin)
Ama-anaerobes amahle ku-Gram
Amagciwane lapho ukumelana okutholakale kwenhlanganisela ye-amoxicillin ne-clavulanic acid kungenzeka
I-streptococcus pneumoniae 1.2
I-Streptococcus group Viridans
Amagciwane amelana nemvelo ngokuhlanganiswa kwe-amoxicillin ne-clavulanic acid
I-1 - kulawa mabhaktheriya, ukusebenza kwemitholampilo kwenhlanganisela ye-amoxicillin ne-clavulanic acid kubonisiwe ezifundweni zokwelashwa.
I-2 - izinhlobo zalezi zinhlobo zamagciwane azakhiqizi i-beta-lactamases.
Ukuzwela nge-amoxicillin monotherapy kuphakamisa ukuzwela okufanayo kwinhlanganisela ye-amoxicillin ne-clavulanic acid.
Zombili izithako ezisebenzayo zokulungiselela kwe-Augmentin ®, i-amoxicillin ne-clavulanic acid, zisheshe zigxiliswe ngokuphelele emzimbeni wamapheshana we-gastrointestinal (GIT) ngemuva kokuphathwa ngomlomo. Ukumuncwa kwezinto ezisebenzayo zokulungiselela i-Augmentin ® kulungile lapho uthatha umuthi ekuqaleni kokudla.
Amapharamitha we-pharmacokinetic we-amoxicillin ne-clavulanic acid, atholakala ezifundweni ezahlukahlukene, lapho amavolontiya azila ukudla enempilo athatha:
- Ithebhulethi eyi-1 ye-Augmentin®, 250 mg / 125 mg (375 mg),
- Izibhebhe ezi-2 zomuthi i-Augmentin®, 250 mg / 125 mg (375 mg),
- Ithebhulethi eyi-1 ye-Augmentin®, 500 mg / 125 mg (625 mg),
- 500 mg we-amoxicillin,
- I-125 mg ye-clavulanic acid.
Amapharamitha ayisisekelo we-pharmacokinetic
Izidakamizwa Dose (mg) Cmax (mg / l) Tmax (h) AUC (mg × h / l) T1 / 2 (h)
I-Amoxicillin ekwakhiweni kwesidakamizwa i-Augmentin®
I-Augmentin®, 250 mg / 125 mg 250 3.7 1.1 10.9 1.0
I-Augmentin®, 250 mg / 125 mg, amaphilisi ama-2 500 5.8 1.5 20.9 1.3
Augmentin® 500 mg / 125 mg 500 6.5 1.5 23.2 1.3
Amoxicillin 500 mg 500 6.5 1.3 19.5 1.1
I-Clavulanic acid ekwakhiweni kwesidakamizwa i-Augmentin®
I-Augmentin®, 250 mg / 125 mg 125 2.2 1,2 1.2 6.2 1.2
I-Augmentin®, 250 mg / 125 mg, amaphilisi ama-2 250 250 1.3 1.3 11.8 1.0
I-Clavulanic acid, 125 mg 125 3.4 0.9 7.8 0.7
I-Augmentin®, 500 mg / 125 mg 125 2.8 1.3 7.3 0.8
I-Cmax - ubuningi beplasma.
I-Tmax - isikhathi sokufika ekupheleleni kwe-plasma.
I-Auc yindawo engaphansi kwejika lesikhathi sokuhlushwa.
Lapho usebenzisa umuthi i-Augmentin ®, ukugxila kwe-plasma kwe-amoxicillin kufana naleyo yokuphathwa komlomo komthamo ofanayo we-amoxicillin.
Njengokuhlanganiswa kwe-amoxicillin kwe-amooticillin ne-clavulanic acid, ukugxila kokuthambisa kwe-amoxicillin ne-clavulanic acid kutholakala kwezicubu ezahlukahlukene kanye noketshezi lwangaphakathi (emgodini wezinzwa, izicubu zesisu, isikhumba, i-adipose kanye nemisipha yemisipha, uketshezi lwe-synovial ne-peritoneal. .
I-Amoxicillin ne-clavulanic acid banesilinganiso esibuthakathaka sokubopha amaprotheni e-plasma. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi cishe i-25% yenani eliphelele le-clavulanic acid kanye ne-18% ye-amoxicillin ku-plasma yegazi ibopha amaprotheni e-plasma egazi.
Ezifundweni zezilwane, akukho cumulation wezingxenye zokulungiswa kwe-Augmentin® kunoma yisiphi isitho satholakala.
I-Amoxicillin, njengama-penicillin amaningi, idlulela ebisini lwebele. Imisuka ye-clavulanic acid nayo ingatholakala ubisi lwebele. Ngaphandle kokuthi kungenzeka ukuthi uzwela, uhudo kanye ne-candidiasis yolwelwesi lomlomo, akunayo eminye imiphumela emibi ye-amoxicillin ne-clavulanic acid empilweni yezingane ezincelisiwe.
Ucwaningo lokuzala kwezilwane lukhombisile ukuthi i-amoxicillin ne-clavulanic acid zinqamula emngceleni we-placental. Kodwa-ke, akukho miphumela emibi ebusayo ku-fetus etholakele.
I-10-25% yedosi yokuqala ye-amoxicillin ikhishwa yizinso njenge-metabolite engasebenzi (penicilloic acid). I-Clavulanic acid isetshenziswe kakhulu ku-2,5-dihydro-4- (2-hydroxyethyl) -5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ne-1-amino-4-hydroxy-butan-2-eyodwa futhi edalulwa yizinso, ngomgudu wokugaya ukudla, kanye nomoya ophelelwe yisikhathi ngendlela yekhabhoni dioksijini.
Njengamanye ama-penicillin, i-amoxicillin idlulwa ikakhulukazi yizinso, kuyilapho i-clavulanic acid isebenza ngayo zombili izindlela ezinamahlwili. Cishe i-60-70% ye-amooticillin kanye ne-40-65% ye-clavulanic acid ikhishwa yizinso ezingashintshiwe amahora okuqala ayi-6 ngemuva kokuqokwa kwethebhulethi eli-1 lomuthi i-Augmentin® kwifomu lomthamo wezibhebhe zefilimu, 250 mg / 125 mg noma 500 mg / 125 mg .
Ukuphathwa kanyekanye kwe-probenecid kubambezela ukuphuma kwe-amoxicillin, kepha hhayi i-clavulanic acid (bheka isigaba "Ukusebenzisana nezinye izidakamizwa").
Izifo ezithathelwanayo ezibangelwa ama-microorganisms azwela i-amoxicillin / clavulanic acid:
• Izifo ze-ENT, ezifana ne-tonsillitis esejwayelekile, i-sinusitis, i-otitis media, okubangelwa kakhulu yi-Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis kanye ne-Streptococcus pyogene.
• Izifo ezisezingeni eliphansi zokuphefumula, njengokuqhuma kwe-bronchitis, i-lobar pneumonia, ne-bronchopneumonia, okuvame ukubangelwa yi-Streptococcus pneumoniae, Haemophilus inflluenzae, neMoaxella catarrhalis.
• Ukutheleleka kwe-urogenital tract, efana ne-cystitis, urethritis, pyelonephritis, izifo zangasese zowesifazane, okuvame ukubangelwa yizinhlobo zomndeni we-Enterobacteriaceae (ikakhulukazi i-Escherichia coli), i-Staphylococcus saprophyticus kanye nohlobo lwe-genus Enterococcus, kanye ne-gonorrhea okubangelwa yi-Neisseria gonorrhoeae.
• Ukutheleleka kwesikhumba nezicubu ezithambile, ezivame ukubangelwa yiStaphylococcus aureus, Streptococcus pyogene, kanye nezinhlobo ze-genus Bacteroides.
• Ukutheleleka kwamathambo kanye nokuhlangana, njenge-osteomyelitis, kuvame ukubangelwa yi-Staphylococcus aureus, uma kudingeka ukwelashwa isikhathi eside.
• Okunye ukutheleleka okuxubile (isib. Ukukhipha isisu, ukuqina kokubeletha, i-septis ye-intra-isisu) njengengxenye yokwelashwa kwesinyathelo.
Ukutheleleka okubangelwa ama-microorganisms azwela i-amoxicillin kungalashwa nge-Augmentin®, ngoba i-amoxicillin ngesinye sezithako zayo ezisebenzayo.
• I-Hypersensitivity kuma-beta-lactams, njengama-penicillin nama-cephalosporins noma ezinye izinto zomuthi,
• iziqephu ezedlule ze-jaundice noma umsebenzi wesibindi okhubazekile onomlando we-amoxicillin / clavulanic acid,
• izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala ngale fomu yemithamo.
ISICELO NGESIKHATHI SOKUQHAWULA KANYE NESIKHATHI SOKUZIPHATHA KAKHULU
Ezifundweni zomsebenzi wokuzala ezilwaneni, ukuphathwa ngomlomo nangabazali be-Augmentin ® akuzange kube nemiphumela emibi.
Esicwaningweni esisodwa kwabesifazane abanokuqhuma ngaphambi kwesikhathi kwezitho zomzimba, kwatholakala ukuthi ukwelashwa kwezidakamizwa prophylactic kungahle kuhlotshaniswe nengozi ekhulayo ye-necrotizing enterocolitis ezinganeni ezisanda kuzalwa. Njengayo yonke imishanguzo, i-Augmentin® ayinconywa ukuthi isetshenziswe ngesikhathi sokukhulelwa, ngaphandle kokuthi inzuzo ebilindelwe kunina idlula ubungozi obungahle bube sezintabeni.
I-Augmentin ® ingasetjenziswa ngesikhathi sokuncelisa ibele. Ngaphandle kokuthi kungenzeka ukuthi kuthinteke, uhudo, kanye ne-candidiasis yezakhi zomlomo zomlomo ezihambisana nokungena kwamanani okulandela umkhondo wezithako ezisebenzayo zalo muthi ubisi lwebele, ayikho eminye imiphumela emibi eye yabonwa ezinsaneni ezinceliswe amabele. Uma kwenzeka imiphumela emibi ezinganeni ezisanceliswe amabele, kufanele ichithwe.
UMDLALO KANYE NOKWENGEZA
Uhlobo lomthamo lusethwa ngokuhlukile ngokuya ngeminyaka, isisindo somzimba, umsebenzi wezinso wesiguli, kanye nobunzima bokutheleleka.
Ukunciphisa ukuphazamiseka okungenzeka okukhona esiswini nokusebenzisa kahle ukumuncwa, umuthi kufanele uphuzwe ekuqaleni kokudla.
Inkambo encane kakhulu yokwelashwa ngama-antibhaktiriya iyizinsuku ezi-5.
Ukwelashwa akufanele kuqhubeke izinsuku ezingaphezu kwezingu-14 ngaphandle kokubuyekezwa kwesimo somtholampilo.
Uma kunesidingo, kungenzeka ukufeza ukwelashwa kwesinyathelo ngesinyathelo (okokuqala, ukuphathwa kangaphakathi kokulungiswa kwe-Augmentin® ngendlela yomthamo; i-powder yokulungiswa kwesisombululo sokuphathwa kwe-intravenous ngokuguqulwa okulandelayo kokulungiselela kwe-Augmentin® ngezindlela zomthamo womlomo).
Kumele kukhunjulwe ukuthi amaphilisi ama-2 e-Augmentin® 250 mg / 125 mg awafani nethebhulethi elilodwa le-Augmentin® 500 mg / 125 mg.
Abantu abadala nezingane ezineminyaka engu-12 ubudala nangaphezulu noma ezinesisindo esingu-40 kg noma ngaphezulu
Ithebhulethi eyi-1 250 mg / 125 mg izikhathi ezintathu ngosuku ngezifo ezinobunzima obukhulu.
Ekungeneni kwezifo ezinzima (kufaka phakathi izifo ezingapheli nezijwayelekile zokuchama komchamo, izifo zokuphefumula ezingapheli nezijwayelekile), kunconywa eminye imithamo ye-Augmentin®.
Izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-12 noma ezinesisindo esingaphansi kwama-40 kg
Ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala, kunconywa ukusebenzisa ezinye izindlela zemithamo yokulungiselela i-Augmentin®.
Akukho ukulungiswa komthamo okudingekayo. Ezigulini esezikhulile ezinokulimala kokusebenza kwethambo, umthamo kufanele ulungiswe njengoba kuchazwe ngenhla kubantu abadala abanomsebenzi wezinso ongasebenzi.
Iziguli ezinenkinga yezinso umsebenzi
Ukulungiswa kwerejimeni yemithamo kususelwa kumthamo ophakanyisiwe ophezulu we-amooticillin kanye nenani le-clearinine clearance.
Uhlobo lwe-Creatinine imvume Augmentin® dosing regimen
> 30 ml / min Akukho ukulungiswa komthamo okudingekayo
I-10-30 ml / min 1 ithebhulethi engu-250 mg / 125 mg (ukuthola ukutheleleka okumaphakathi) izikhathi ezi-2 ngosuku
Khipha amafomu, izinhlobo namagama we-Augmentin
Njengamanje, i-Augmentin iyatholakala kulezi zinhlobo ezintathu ezilandelayo:
2. I-Augmentin EU,
3. I-Augmentin SR.
Lezi zontathu lezi zinhlobonhlobo ze-Augmentin zingafani okuthengiswayo kwe-antibiotic efanayo nemiphumela efanayo, izinkomba nemithetho yokusetshenziswa. Umehluko kuphela phakathi kwezinhlobo zezentengiso ze-Augmentin umthamo wento esebenzayo kanye nendlela yokukhululwa (amaphilisi, ukumiswa, i-powder yesisombululo somjovo). Lokhu umehluko kukuvumela ukuthi ukhethe uhlobo olungcono kakhulu lomuthi ecaleni ngalinye elithile. Isibonelo, uma umuntu omdala ngenxa yesizathu esithile engakwazi ukugwinya amaphilisi e-Augmentin, angasebenzisa ukumiswa kwe-Augmentin EU, njll.
Imvamisa, zonke izinhlobo zomuthi zibizwa nje ngokuthi “i-Augmentin,” futhi ukucacisa ukuthi kusho ukuthini, zimane zengeza igama lefomu lomthamo nomthamo, ngokwesibonelo, ukumiswa kuka-Augmentin 200, amaphilisi we-Augmentin 875, njll.
Izinhlobo ze-Augmentin zitholakala ngalezi zinhlobo ezilandelayo zomthamo:
I-Powder yokumiswa komlomo
I-Powder yesisombululo somjovo.
2. I-Augmentin EU:
I-Powder yokumiswa kokuphathwa komlomo.
3. I-Augmentin SR:
Amathebulethi wokukhishwa aguqulwe ngokuthatha isikhathi eside
Empilweni yansuku zonke, yokwakheka kwezinhlobo nezinhlobo ezahlukahlukene ze-Augmentin, kuvame ukusetshenziswa izifushaniso ezifinqiwe, eziqukethe igama elithi "Augmentin" kanye nenkomba yefomu lomthamo noma ngokwesilinganiso, ngokwesibonelo, ukumiswa kwe-Augmentin, i-Augmentin 400, njll.
Ukwakheka kwazo zonke izinhlobo nezinhlobo zemithamo ye-Augmentin njengoba izingxenye ezisebenzayo zifaka izinto ezimbili ezilandelayo:
I-Amoxicillin ne-clavulanic acid ezinhlobonhlobo ze-Augmentin ziqukethe imithamo ehlukene kanye nokulinganiswa komunye nomunye, okukuvumela ukuthi ukhethe inani elifanele lezinto ezisebenzayo zecala ngalinye nobudala bomuntu.
I-Amoxicillin umuthi olwa namagciwane weqembu le-penicillin, onobubanzi besenzo futhi ulimaza isibalo esikhulu samagciwane we-pathogenic abangela izifo ezithathelwanayo zezitho nezinqubo ezahlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, i-amooticillin ibekezelelwa kahle futhi akuvamile ukuba ibe nemiphumela emibi, eyenza le antibiotic iphephe, isebenze futhi ivunyelwe ukusetshenziswa ngisho nakwabesifazane abakhulelwe kanye nezinsana.
Kodwa-ke, ine-drawback eyodwa - ukumelana ne-amoxicillin ezinhlotsheni eziningi zamagciwane ngemuva kwezinsuku eziningana zokusetshenziswa, ngoba ama-bacterium aqala ukukhiqiza izinto ezikhethekile - ama-lactamases abhubhisa i-antibiotic. Lokhu kubuyiswa komkhawulo ukusetshenziswa kwe-amoxicillin ekwelapheni izifo ezibangelwa amagciwane.
Kodwa-ke, ukusweleka kwe-amooticillin kuyaqedwa. i-clavulanic acid , okuyingxenye yesibili ye-Augmentin. I-Clavulanic acid iyinto eyenza ukuthi ama-lactamases akhiqizwe ngamagciwane futhi, ngenxa yalokho, enze i-amooticillin isebenze ngisho naphezu kwamagciwane ayekade engenandaba nesenzo sawo. Okusho ukuthi, i-clavulanic acid yenza i-amoxicillin isebenze ngokulwa namagciwane ayemelana nesenzo sayo, esandisa kakhulu ububanzi bokusetshenziswa kwezidakamizwa ezihlanganisiwe i-Augmentin.
Ngakho-ke, inhlanganisela ye-amoxicillin + clavulanic acid yenza ukuthi ama-antibiotic aphumelele kakhudlwana, anwebise ukubukeka kwawo kwesenzo futhi avimbele ukuthuthukiswa kokumelana kwamagciwane.
Umthamo we-Augmentin (wabantu abadala nezingane)
Uhlobo ngalunye lomthamo we-Augmentin uqukethe izinto ezimbili ezisebenzayo - i-amoxicillin ne-clavulanic acid, ngakho-ke umthamo wezidakamizwa uboniswa hhayi ngenombolo eyodwa, kepha ngababili, ngokwesibonelo, i-400 mg + 57 mg, njll. Ngaphezu kwalokho, idijithi yokuqala ihlala ikhombisa inani le-amoxicillin, nelesibili - clavulanic acid.
Ngakho-ke, i-Augmentin ngesimo se-powder yokulungiswa kwesisombululo somjovo iyatholakala kumthamo we-500 mg + 100 mg no-1000 mg + 200 mg. Lokhu kusho ukuthi ngemuva kokufaka i-powder ngamanzi, kutholakala isisombululo esiqukethe i-500 mg noma i-1000 mg ye-amooticillin futhi, ngokulandelana, i-100 mg ne-200 mg ye-clavulanic acid. Empilweni yansuku zonke, lezi zinhlobo zemithamo zivame ukubizwa ngokuthi "Augmentin 500" no "Augmentin 1000", kusetshenziswa isithombe esibonisa okuqukethwe i-amoxicillin nokushiya inani le-clavulanic acid.
I-Augmentin kwifomu le-powder ukulungiselela ukumiswa kokumiswa komlomo kuyatholakala kumithamo emithathu: 125 mg + 31.25 mg nge-5 ml, 200 mg + 28,5 mg nge-5 ml no-400 mg + 57 mg nge-5 ml. Empilweni yansuku zonke, ukubizwa kwenani le-clavulanic acid kuvame ukushiywa, futhi kukhonjiswa kuphela okuqukethwe kwe-amooticillin, ngoba ukubalwa komthamo kwenziwa ngqo kwi-antibiotic. Ngenxa yalokhu, ukuqokwa okufishane kokumiswa kwemithamo ehlukahlukene kubukeka kanjena: "Augmentin 125", "Augmentin 200" kanye "Augmentin 400".
Njengoba ukumiswa kuka-Augmentin kusetshenziswa ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-12, kuvame ukubizwa nge- "Izingane Augmentin". Ngokuvumelana nalokho, umthamo wokumiswa ubizwa nangokuthi usana. Eqinisweni, umthamo wokumiswa usejwayelekile futhi kungenzeka usetshenziswe kahle kubantu abadala abanesisindo somzimba ophansi, kodwa ngenxa yokusebenzisa kakhulu le ndlela yalesi sidakamizwa ezinganeni, babizwa ngezingane.
Amathebhulethi e-Augmentin atholakala kumithamo emithathu: 250 mg + 125 mg, 500 mg + 125 mg kanye ne-875 mg + 125 mg, ehluka kuphela kokuqukethwe kwe-amoxicillin. Ngakho-ke, empilweni yansuku zonke, amaphilisi avame ukukhonjiswa anciphise, okubonisa kuphela umthamo we-amooticillin: "Augmentin 250", "Augmentin 500" ne "Augmentin 875". Inani elikhonjisiwe le-amooticillin liqukethe kuthebhulethi eyodwa ye-Augmentin.
I-Augmentin EC itholakala kwifomu le-powder ukulungiselela ukulungiswa kokumiswa kumthamo owodwa - 600 mg + 42.9 mg nge-5 ml. Lokhu kusho ukuthi i-5 ml yokumiswa okuqediwe iqukethe ama-600 mg we-amoxicillin no-42.9 mg we-clavulanic acid.
I-Augmentin SR itholakala kwifomu lethebhulethi ngomthamo owodwa wezinto ezisebenzayo - 1000 mg + 62,5 mg. Lokhu kusho ukuthi ithebhulethi eyodwa iqukethe i-1000 mg ye-amoxicillin ne-62,5 mg ye-clavulanic acid.
Amacwecwe ka-Augmentin ahlukile ngesimo se-oval, igobolondo elimhlophe nombala omhlophe noma omphuzi omhlophe lapho kuphuka. Olunye uhlangothi lwamathebhulethi olunjalo lunomugqa lapho umuthi ungaphuka khona. Ngasohlangothini ngalunye lomuthi kunezinhlamvu ezinkulu u-A no-C. Amacwecwe athengiswa ezinhlamvini zezingcezu ezi-7 noma eziyi-10, futhi kwiphakethe elilodwa kungaqukatha amaphilisi ayi-14 noma angama-20.
Umuthi ukhiqizwa ngezinye izindlela:
Izindiza zefulawa lapho kufanele zilungiselele ukumiswa. Leli fomu livezwa ngezinketho eziningana, kuya ngomthamo we-amoxicillin ngama-milliliters amahlanu emithi - 125 mg, 200 mg noma i-400 mg.
Izimpunga ze-Powder ezihlanjululwe ngenxa yomjovo we-intravenous. Futhi atholakala kumithamo emibili - 500mg + 100mg no-1000mg + 200mg.
Izingxenye ezisebenzayo zamathebulethi ka-Augmentin zingxube ezimbili:
I-Amoxicillin, eyethulwa kulo muthi njengefomu le-trihydrate.
I-Clavulanic acid, etholakala ezibhebheni ngesimo sikasawoti we-potassium.
Ngokuya ngenani lalezi zithako kuthebhulethi eyodwa, imithamo elandelayo ihlukaniswa:
Kulokhu kuqokwa, idijithi yokuqala ikhombisa inani le-amoxicillin, bese elesibili likhombisa okuqukethwe yi-clavulanic acid.
Izakhi ezisizayo ezingaphakathi ezibhebheni yi-colloidal silicon dioxide, i-MCC, i-magnesium stearate ne-carboxymethyl starch sodium. Igobolondo lomuthi lenziwa nge-macrogol (4000 ne-6000), i-dimethicone, i-hypromellose (5 ne-15 cps) ne-titanium dioxide.
I-Amoxicillin ekhona kulo muthi inomphumela we-bactericidal ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamagciwane, kepha ayithinti ama-microorganisms anamandla okuthola ukuthula kwe-beta-lactamases, ngoba ama-enzyme anjalo ayayibhubhisa. Ngenxa ye-beta-lactamase clavulanic acid esetshenziswayo, ukubuka kwezinyathelo zamathebulethi kuyanda. Ngalesi sizathu, ukuhlanganiswa kwalezi zingxube ezisebenzayo kusebenza kakhulu kunezidakamizwa eziqukethe i-amoxicillin kuphela.
I-Augmentin isebenza ngokulwa ne-staphylococci, i-listeria, i-gonococci, i-pertussis bacillus, i-peptococcus, i-streptococcus, i-hemophilic bacillus, i-helicobacter, i-clostridia, i-leptospira nezinye izinto eziningi ezincane.
Kodwa-ke, amagciwane afana noProteus, uSalmonella, uShigella, u-Escherichia, i-pneumococcus ne-Klebsiella angamelana naleli gciwane. Uma ingane itheleleke ngamagciwane, i-mycoplasma, i-chlamydia, i-entero-noma i-cytrobacter, i-pseudomonas kanye namanye amagciwane, umphumela wokwelashwa no-Augmentin ngeke.
I-Tablet Augmentin imiselwe i-:
I-Pneumonia noma i-bronchitis,
Imithombo yabezindaba ye-Purulent otitis
I-Pyelonephritis, cystitis kanye nezinye izifo zohlelo lwe-excretory,
Ukutheleleka kwe-Streptococcal / staphylococcal kwesikhumba noma izicubu ezithambile,
I-Periodontitis kanye nezinye izifo ze-odontogenic,
I-Sepsis kanye nokunye ukutheleleka okucasulwa ama-microorganisms atholaka izidakamizwa.
Ngingathatha iminyaka emingaki?
Ukwelashwa ngamaphilisi we-Augmentin kunconywa ezinganeni ezingaphezu kweminyaka eyi-12. Ingabhekelwa nasezingane ezincane uma isisindo somzimba wengane sidlula amakhilogremu angama-40. Uma ufuna ukunikeza umuthi onjalo ingane enesisindo somzimba esiphansi futhi nangaphambi kweminyaka yobudala (ngokwesibonelo, eneminyaka engu-6), sebenzisa ukumiswa. Uhlobo olunjalo loketshezi lungasetshenziswa ngisho nasezinganeni.
Imithetho ejwayelekile yokuthatha zonke izinhlobo nezinhlobonhlobo ze-Augmentin
Amathebulethi kufanele agwinywe ephelele, ngaphandle kokuhlafuna, ngaphandle kokuluma noma ukuchoboza nganoma iyiphi enye indlela, futhi kugezwe phansi ngenani elincane lamanzi (isigamu seglasi).
Ngaphambi kokuthatha ukumiswa, linganisa inani elidingekayo usebenzisa i-cap ekhethekile yokulinganisa noma isirinji enamamaki wokukhamba. Ukumiswa kuthathwa ngomlomo, ukugwinya inani elilinganisiwe elidingekayo ngqo kusuka kwikhola yokulinganisa. Izingane ezingathi ngenxa yezizathu ezithile zingakwazi ukuphuza ukumiswa okuhlanzekile, kunconywa ukuyifaka emanzini ngesilinganiso se-1: 1, ngemuva kokuthulula inani elidingekayo kusuka ku-cap yokukala engilazini noma kwesinye isitsha. Ngemuva kokusebenzisa, isipikili sokulinganisa noma isirinji kufanele kuthunyelwe ngamanzi ahlanzekile.
Ukuze unciphise ukungaphatheki kahle kanye nemiphumela emibi evela emgudwini wesisu, kunconywa ukuthatha amaphilisi nokumiswa ekuqaleni kokudla. Kodwa-ke, uma lokhu kungenakwenzeka nganoma yisiphi isizathu, khona-ke amaphilisi angathathwa nganoma yisiphi isikhathi maqondana nokudla, ngoba ukudla akuwuthinti kakhulu umphumela womuthi.
Imijovo ye-Augmentin iphathwa kuphela ngaphakathi. Ungafaka injet solution (kusuka kwisirinji) noma ukumnika ("dropper"). Ukuphathwa kwe-intramuscular of the drug akuvunyelwe! Isixazululo somjovo silungiswa kusuka ku-powder ngokushesha ngaphambi kokuphathwa futhi asigcinwa ngisho esiqandisini.
Ukuphathwa kwamathebhulethi nokumiswa, kanye nokuphathwa kwe-solution ye-Augmentin, kufanele kwenziwe ngezikhathi ezithile. Isibonelo, uma udinga ukuthatha umuthi kabili ngosuku, khona-ke kufanele ulondoloze isikhathi esifanayo samahora ayi-12 phakathi komthamo. Uma kudingekile ukuthatha i-Augmentin amahlandla ama-3 ngosuku, khona-ke kufanele ukwenze lokhu njalo emahoreni angama-8, uzama ukubuka lesi sikhathi, njll.
Inkambo encane evunyelwe yokusebenzisa noma yiluphi uhlobo nezinhlobo ze-Augmentin izinsuku eziyi-5. Lokhu kusho ukuthi awukwazi ukuthatha umuthi isikhathi esingaphansi kwezinsuku ezingama-5. Isikhathi esivumelekile sokusebenzisa noma yiluphi uhlobo nezinhlobonhlobo ze-Augmentin ngaphandle kokuhlolwa okuphindaphindiwe ngamaviki ama-2. Okusho ukuthi, ngemuva kokuxilongwa okwenziwe ngaphandle kokuhlolwa kwesibili, ungaphuza umuthi isikhathi esingeqile kumaviki ama-2. Uma, phakathi nesikhathi sokulashwa, kwenziwa ukuhlolwa okuphindaphindiwe, okubonisa ukuthi kunamandla, kepha kuhamba kancane, amandla okuphulukisa, ke, ngokuya ngale miphumela, isikhathi sokuphathwa kwe-Augmentin singakhushulelwa kumaviki ama-3 noma ngisho ayi-4.
Uma kunesidingo, ungafeza ukwelashwa kwesinyathelo, okubandakanya ukusetshenziswa okulandelanayo kwemijovo kanye namathebulethi noma ukumiswa ngaphakathi. Kulokhu, okokuqala ukuthola umphumela omkhulu, kwenziwa imijovo ye-Augmentin, bese beshintsha bethatha amaphilisi noma ukumiswa.
Akufanele uthathe isikhundla amafomu nemithamo ehlukahlukene ye-Augmentin nomunye, ngokwesibonelo, esikhundleni sethebhulethi elilodwa le-500 mg + 125 mg, thatha amaphilisi ama-2 e-250 mg + 125 mg, njll. Ukubuyiselwa okunjalo akunakwenziwa, ngoba imithamo ehlukene yohlobo olufanayo lwesidakamizwa ayilingani. Njengoba kunokukhethwa okubanzi kwemithamo ye-Augmentin, kufanele njalo ukhethe okuyiyona, ungasebenzisi leyo ekhona, uzama ukuyibuyisela enye edingekayo.
Ithebhulethi ayinikezwa izingane ezine-hypersensitivity kunoma iziphi izithako zazo. Futhi, lo muthi uyaphulwa uma ingane iguliswa amanye amakhambi, ama-penicillin noma i-cephalosporins. Uma isiguli esincane sinokungasebenzi kahle kwesibindi noma izinso, ukusetshenziswa kwe-Augmentin kudinga ukubhekwa kwezokwelashwa nokulungiswa komthamo ngokuya ngemiphumela yokuhlolwa.
Siphakamisa ukuthi ubuke ividiyo kaDkt Komarovsky mayelana nokuthi imiphi imishanguzo okufanele ibe sendlini lapho kunomntwana nokuthi ungayithatha kanjani ngokufanele.
Umzimba wengane ungaphendula ekwamukelweni kuka-Augmentin:
Ukuvela kokungezwani komzimba, njenge-urticaria noma ukulunywa kwesikhumba.
Ngezitulo ezikhululekile, isicanucanu, noma izindlela zokuhlanza.
Ushintsho enanini lamaseli egazi, ngokwesibonelo, i-leukocytopenia ne-thrombocytopenia. Ezimweni ezingavamile, umuthi uvusa i-anemia, i-agranulocytosis kanye nezinye izinguquko.
Ukuvela kwe-candidiasis kwesikhumba noma ulwelwesi lwama-mucous.
Ukwanda komsebenzi wama-enzyme wesibindi.
Isiyezi noma ikhanda.
Ngesinye isikhathi, ukwelashwa nge-antibiotic enjalo kungakhipha ukuqaqamba, i-stomatitis, i-colitis, i-anaphylaxis, ukuphazamiseka kwezinzwa, ukuvuvukala kwezinso nokunye ukusabela okungekuhle. Uma zivela enganeni, amaphilisi akhanselwa masinyane.
Uhlobo lwe-Augmentin kumathebulethi luyathinteka isisindo nobudala besiguli, kanye nobunzima besifo se-bacterial, kanye nomsebenzi wezinso.
Ukuze umuthi ubange imiphumela emibi emincane evela emgudwini wesisu, kuyelulekwa ukuwuphuza ngokudla (ekuqaleni kokudla). Uma lokhu kungenzeki, ungaphuza iphilisi nganoma yisiphi isikhathi, ngoba ukugaya ukudla akuphazamisi ukumuncwa kwalo.
Umuthi unqunyelwe okungenani izinsuku ezi-5, kepha ungabi ngaphezu kwamaviki ama-2.
Kubalulekile ukwazi ukuthi ithebhulethi elilodwa le-500mg + 125mg alikwazi ukushintshwa namathebhulethi amabili we-250mg + 125mg. Imithamo yabo ayilingani.
Ukuzikhethela kwethomu lomthamo wezidakamizwa
Akunandaba nobunzima besifo esithathelwanayo, abantu abadala nezingane ezineminyaka engaphezu kwengu-12 noma abanesisindo somzimba esingaphezu kwamakhilogremu amane kufanele bathathe i-Augmentin kuphela ngefomu lepilisi (noma imuphi umthamo - 250/125, 500/125 noma 875/125) noma ukumiswa ngomthamo we-400 mg + 57 mg Ukumiswa ngemithamo ye-125 mg ne-200 mg akufanele kuthathwe abantu abadala nezingane ezineminyaka engaphezu kwengu-12 ubudala, ngoba inani le-amooticillin ne-clavulanic acid elikulo alilinganiseli uma kubhekwa izinga lokulesa kanye nokwaba umuthi kwezicubu.
Izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-12 noma ezinesisindo somzimba esingaphansi kwama-40 kg kufanele zithathe i-Augmentin kuphela ekumiseni. Kulokhu, izingane ezingaphansi kwezinyanga ezintathu zinganikwa kuphela ukumiswa ngomthamo we-125 / 31.25 mg. Ezinganeni ezingaphezulu kwezinyanga ezintathu ubudala, kuvunyelwe ukusebenzisa ukumiswa nganoma imiphi imithamo yezingxenye ezisebenzayo. Ngenxa yokuthi ukumiswa kwe-Augmentin kwenzelwe izingane, kuvame ukubizwa ngokuthi "i-Augmentin Yezingane," ngaphandle kokubonisa ifomu lomthamo (ukumiswa). Imithamo yokumiswa ibalwa ngokwahlukile ngokuhambisana nobudala kanye nesisindo somntwana.
Imijovo ye-Augmentin ingasetjenziswa ezinganeni zanoma ibuphi ubudala nakubantu abadala, ngemuva kokubala umthamo ngamunye ngesisindo somzimba.
Ukumiswa kwe-Augmentin EU namaphilisi we-Augmentin SR angathathwa kuphela kubantu abadala nasezinganeni ezingaphezu kweminyaka eyi-12 noma abe nesisindo somzimba esingaphezu kwama-40 kg.
Imithetho yokulungiselela ukumiswa okwesikhashana i-Augmentin ne-Augmentin EU
Awukwazi ukuthulula yonke impuphu ebhodleleni bese uyihlukanisa, ngokwesibonelo, yaba izingxenye ezi-2, 3, 4 noma ngaphezulu, bese uhlukanisa izingxenye ezitholakele ngokwahlukana. Ukuchoboza okunjalo kuholela kumthamo ongalungile nokusabalalisa okungalingani kwezinto ezisebenzayo ezingxenyeni zefulawa, ngoba akunakwenzeka ukuyixuba ukuze ama-molecule ezinhlaka ezisebenzayo asatshalaliswe ngokufana kulo lonke ivolumu. Lokhu-ke, kubangela ukungasebenzi kokumiswa okulungiselelwe kusuka engxenyeni yempuphu, kanye nokwenqunyelwa okweqile kokumiswa okwenziwe kwenye ingxenye yempuphu. Okusho ukuthi, ngemuva kokuchotshozwa, engxenyeni eyodwa yempuphu kungaba khona izinto ezimbalwa ezisebenzayo, kanti okunye, okuphambene nalokho, kukhulu kakhulu. Njengomphumela, ukumiswa okwenziwe kusuka kwimpuphu enokuqukethwe okuphansi kwezakhi ezisebenzayo kuzoqukatha ukuqoqwa okuningana kwe-amoxicillin ne-clavulanic acid kunesidingo. Futhi okunye ukumiswa, okulungiselelwe kusuka kwimpuphu enesamba esikhulu se-amoxicillin ne-clavulanic acid, ngakolunye uhlangothi, kuzoqukatha ukuhlushwa okuningi kwezakhi ezisebenzayo.
Ukumiswa kulungiswa nganoma imuphi umthamo wezinto ezisebenzayo ngokulandelayo:
1. I-60 ml yamanzi abilisiwe abilisiwe afakwa ebhodleleni le-powder (inani lamanzi lingalinganiswa ngesirinji).
2. Isikhafu ku-cap cap bese uyixhawula ngamandla kuze kube yilapho ufulawa uqothula ngokuphelele.
3. Bese ubeka ibhodlela imizuzu engu-5 endaweni eyisicaba.
4. Uma ngemuva kwalokhu, izinhlayiya ezingafakwanga zempuphu ziqoqa ezansi, bese unyakazisa i-vial ngamandla futhi iphinde ibeke endaweni eyisicaba imizuzu emi-5.
5. Lapho, ngemuva kwemizuzu emi-5 yokuxazulula, azikho izinhlayiya ze-powder ezihlala ezansi kwe-vial, vula isivimbo bese ufaka amanzi abilisiwe abolile kumaki.
Kumele kukhunjulwe ukuthi uma kulungiswa ukumiswa ngomthamo we-125 / 31.25, kuzodingeka amanzi amaningi (cishe ama-92 ml) kunemithamo engama-200 / 28,5 no-400/58 (cishe u-64 ml). Ngakho-ke, kokuhlakazwa kokuqala, kuyadingeka ukuthi ungathathi ngaphezulu kwama-60 ml wamanzi (kuvunyelwe ukuthulula kancane, kodwa hhayi ngaphezulu, ukuze kuthi ngemuva kokuthola ukumiswa kungaveli ukuthi izinga layo liphakeme kunophawu olusebhodleleni).
Ukumiswa okuqediwe kungagcinwa esiqandisini (ngaphandle kweqhwa) isonto lonke, ngemuva kwalokho yonke insalela engasetshenziswanga kufanele ilahlwe. Uma inkambo yokwelashwa ihlala ngaphezu kwezinsuku ezingama-7, bese kuthi ngemuva kwesonto elondoloziwe, udinga ukulahla izinsalela zekhambi elidala bese ulungiselela entsha.
Imithetho yokulungiswa kwesixazululo somjovo we-Augmentin
Ukulungiselela isixazululo somjovo, okuqukethwe ibhodlela eline-powder ku-umthamo we-500/1100 (0,6 g) ku-10 ml wamanzi kufanele kuxutshwe, kuthi ibhodlela elinomthamo we-1000/200 (1.2 g) ku-20 ml wamanzi. Ukuze wenze lokhu, u-10 noma u-20 ml wamanzi wokujova udonswa kwisirinji, emva kwalokho kuvulwe ibhodlela elifunekayo elinempuphu. Isigamu samanzi avela kwisirinji (okungukuthi, i-5 noma i-10 ml) engezwa ku-vial futhi anyakaziswe kahle kuze kube yilapho i-powder iqothulwe ngokuphelele. Ngemuva kwalokho faka amanzi asele bese uxubha kahle futhi. Ngemuva kwalokhu, isixazululo esiphelile sishiywe ume imizuzu emithathu kuya kwemihlanu. Uma kuvela imvuthuluka ye-insoluble powder ezansi kwe-vial ngemuva kokuxazulula, gudluza isitsha futhi ngamandla. Lapho kungabikho zinhlayiya ze-powder ezansi kwe-vial ngemuva kokuxazulula imizuzu emithathu kuya kwemihlanu, isixazululo singabhekwa sesilungile futhi sisetshenzisiwe.
Uma i-Augmentin iphathwa ngejethi, khona-ke inani elifanele lesisombululo lithathwa kusuka ku-vial liye kwisirinji esiyinyumba bese lijovwa ngaphakathi kancane kancane ngaphezu kwemizuzu emi-3 kuye kweli-4. Ngokuphathwa kwe-jet intravenous, isisombululo kufanele silungiselelwe ngokushesha ngaphambi kokusetshenziswa. Isikhathi esiphezulu esivumelekile sokulungiswa kwekhambi esiphelile ngaphambi kokujova ukungena ngaphakathi asikho ngaphezu kwemizuzu engama-20.
Uma u-Augmentin ezophathwa ngendlela ye-dropper, khona-ke okuqukethwe kwe-vial (ikhambi lonke eliqediwe) kuthululelwa ku-infusion fluid esele kuhlelo (i-dropper). Ngaphezu kwalokho, isixazululo esinokuqukethwe okusebenzayo kwe-500/1100 sihlanjululwe ngo-50 ml we-infusion fluid, nesixazululo ngomthamo we-1000/100 ml we-infusion fluid. Ngemuva kwalokho lonke ivolumu yesisombululo esikhanyayo lifakwe i-dropwise imizuzu engama-30 kuya kwengama-40.
Njengoketshezi lokufaka, ungasebenzisa lezi zidakamizwa ezilandelayo:
Isixazululo nge-potassium ne-sodium chloride,
Isodium bicarbonate solution.
Isixazululo esilungele ukumiliselwa singagcinwa amahora amathathu kuya kwayi-4.
Ukumiswa kuka-Augmentin (Augmentin 125, Augmentin 200 no-Augmentin 400) - imiyalo esetshenziselwa izingane (ngokubalwa komthamo)
Ngaphambi kokusebenzisa, kufanele ukhethe i-powder ngomthamo ofanele futhi ulungiselele ukumiswa. Ukumiswa okuqediwe kufanele kugcinwe esiqandisini, kungabi ngaphansi kweqhwa, izinsuku ezingama-7. Uma udinga ukuyithatha isikhathi esingaphezu kwesonto, khona-ke izinsalela zokumiswa okudala okugcinwe esiqandisini kufanele zilahlwe izinsuku ezingama-8 bese kulungiswa entsha.
Ngaphambi kokwamukelwa ngakunye, kudingekile ukushukumisa i-vial ngokumiswa, futhi kuphela emva kwalokho, shayela inani elidingekayo usebenzisa i-cap cap noma i-syringe ejwayelekile enokwehlukanisa. Ngemuva kokusetshenziswa ngakunye, hlambulula i-cap ne-syringe ngamanzi ahlanzekile.
Ukumiswa kungadakwa ngqo kusuka ku-cap yokulinganisa noma ngaphambili kuthululelwe esitsheni esincane, isibonelo, ingilazi, njll. Kunconywa ukuthulula ukumiswa okudonselwe kwisirinji ku-isipuni noma ingilazi. Uma ngesizathu esithile kunzima ingane ukugwinya ukumiswa okuhlanzekile, khona-ke inani elilinganisiwe lomthamo owodwa lingangezelelwa namanzi ngesilinganiso 2: 1. Kulokhu, awukwazi ukusula ngokushesha i-powder ngamanzi aphindwe kabili. Ukumiswa kufanele kuhlanjululwe ngaphambi komthamo ngamunye futhi kuphela inani elidingekayo ngesikhathi esisodwa.
Imithamo ye-Augmentin esimweni ngasinye ibalwa ngokwaleso isisindo somzimba, ubudala kanye nobunzima besifo sengane. Kulesi simo, i-amooticillin kuphela ethathwa ukubalwa, futhi i-clavulanic acid ayinakwa. Kufanele kukhunjulwe ukuthi izingane ezingaphansi kweminyaka emi-2 ubudala kufanele zinikezwe kuphela ukumiswa kwe-Augmentin 125 / 31.5. Futhi izingane ezingaphezulu kweminyaka emibili ubudala zinganikwa ukumiswa nanoma imiphi imithamo yezinto ezisebenzayo (Augmentin 125, 200 no-400).
Izingane ezingaphansi kwezinyanga ezintathu umthamo wansuku zonke wokumiswa kwe-Augmentin kufanele ubalwe ngokuya ngesilinganiso sama-30 mg we-amoxicillin nge-1 kg. Bese uhumusha inani le-mg ku-milliliters, umthamo ophuma nsuku zonke uhlukaniswe ngu-2 bese unikeza ingane kabili ngosuku njalo ngamahora ayi-12. Cabanga ngesibonelo sokubala umthamo wokumiswa kuka-Augmentin 125 / 31.25 wengane eneminyaka eyi-1 enesisindo somzimba esingu-6 kg. Ngakho-ke, umthamo wansuku zonke kuye ngu-30 mg * 6 kg = 180 mg. Okulandelayo, udinga ukubala ukuthi mangaki ama-millilitha wokumiswa kwe-125 / 31.25 equkethe i-180 mg ye-amoxicillin. Ukuze wenze lokhu, sakha lengxenye:
I-125 mg ku-5 ml (lokhu kungukuhlaziywa kokumiswa njengoba kumenyezelwe ngumenzi)
I-180 mg ku-X (x) ml.
Ukusuka engxenyeni sibala i-equation: X = 180 * 5/125 = 7.2 ml.
Okusho ukuthi, umthamo wansuku zonke we-Augmentin wengane enonyaka owodwa onesisindo somzimba ongama-6 kg uqukethwe ku-7.2 ml wokumiswa onomuthi ka-125 / 31.25. Njengoba ingane idinga ukunikezwa ukumiswa kabili ngosuku, bese uhlukanisa u-7.2 / 2 = 3.6 ml. Ngakho-ke ingane idinga ukunikezwa u-3.6 ml wokumiswa kabili ngosuku.
Izingane ezisukela ezinyangeni ezintathu kuya kwengu-12 ubudala ukubalwa komthamo wokumiswa kwenziwa ngokuhambisana nezinye izilinganiso, kodwa futhi kucatshangelwa isisindo somzimba nobunzima balesi sifo. Ngakho-ke, umthamo wansuku zonke wokumiswa kokugxila okuhlukahlukene ubalwa yizilinganiso ezilandelayo:
Ukumiswa 125 / 31.25 - ukubala umthamo ngokusho kwesilinganiso esingu-20 - 40 mg nge-1 kg yesisindo,
Ukumiswa okungama-200 / 28,5 no-400/557 - ukubala umthamo ku-25 - 45 mg nge-1 kg yesisindo.
Ngasikhathi sinye, ama-ratios aphansi (20 mg nge-1 kg yokumiswa kuka-125 mg no-25 mg nge-1 kg ukumiswa kwama-200 mg nama-400 mg) athathwe ukubala imithamo yansuku zonke ye-Augmentin yokwelashwa kwezifo zesikhumba nezicubu ezithambile, kanye ne-tonsillitis engapheli. Futhi isilinganiso esiphakeme (40 mg / 1 kg sokumiswa kwe-125 mg kanye ne-45 mg / 1 kg yokumiswa kwe-200 mg ne-400 mg) sithathwa ukubala imithamo yansuku zonke yokwelashwa kwazo zonke ezinye izifo (i-otitis media, i-sinusitis, i-bronchitis, i-pneumonia, i-osteomyelitis, njll. .).
Ngaphezu kwalokho, ezinganeni zalesi sigaba sobudala, kufanele kukhunjulwe lo mthetho olandelayo - ukumiswa okunokuhlangana okungu-125 / 31,5 kunikezwa kathathu ngosuku njalo ngamahora ayisishiyagalombili, futhi ukumiswa ngemithamo ka-200 / 28,5 no-400/58 kunikezwa kabili ngosuku ngezikhathi ezithile. ngehora leshumi nambili. Ngokuvumelana nalokho, ukuthola ukuthi ukumiswa kwengane kungakanani, okokuqala, ngokuya ngesilinganiso esisezingeni elikhonjiswe ngenhla, umthamo wansuku zonke we-Augmentin ku-mg ubalwa, bese uguqulwa ube ngamamilimitha wokumiswa ngokubekwa okukodwa noma kokunye. Ngemuva kwalokho, i-ml ephumayo ihlukaniswe ngemithamo emi-2 noma emi-3 ngosuku.
Cabanga ngesibonelo sokubala umthamo wokumiswa kwezingane ezingaphezulu kwezinyanga ezintathu. Ngakho-ke, ingane enesisindo somzimba wamakhilogremu angama-20 ihlushwa i-tonsillitis engamahlalakhona. Ngakho-ke, udinga ukuthatha ukumiswa kwe-125 mg ku-20 mg nge-1 kg noma ukumiswa kwama-200 mg no-400 mg ku-25 mg nge-1 kg. Sibala ukuthi mangaki ama-mg wezinto ezisebenzayo ingane eziyidingayo ekumiseni konke ukugxila:
1. Ukumiswa 125 / 31.25: 20 mg * 20 kg = 400 mg ngosuku,
2. Ukumiswa 200 / 28,5 no-400/58: 25 mg * 20 kg = 500 mg ngosuku.
Okulandelayo, sibala ukuthi mangaki ama-millilitha wokumiswa aqukethe ama-400 mg nama-500 mg we-amooticillin, ngokulandelana. Ukwenza lokhu, siqamba isilinganiso.
Ukumiswa okwesikhashana kwe-125 / 31.25 mg:
400 mg ku-X ml
I-125 mg ku-5 ml, X = 5 * 400/125 = 16 ml.
Okokumiswa okunenqwaba yama-200 / 28,5:
500 mg ku-X ml
I-200 mg ku-5 ml, X = 5 * 500/200 = 12.5 ml.
Ukumiswa okwesikhashana nge-400/5 mg mg:
I-400 mg ku-5 ml, X = 5 * 500/400 = 6.25 ml.
Lokhu kusho ukuthi enganeni enesisindo somzimba esingu-10 kg ehlushwa i-tonsillitis, umthamo wansuku zonke wokumiswa kuka-125 mg ngu-16 ml, ukumiswa kuka-200 mg - 12.5 ml kanye nokumiswa okungu-400 mg - 6.25 ml. Okulandelayo, sihlukanisa ama-milliliters wesilinganiso sansuku zonke sokumiswa ku-2 noma i-3 doses ngosuku. Ukumiswa okwesikhashana kwe-125 mg, hlukanisa ngo-3 bese uthola: 16 ml / 3 = 5.3 ml. Okokumiswa okwesikhashana, i-200 mg ne-400 mg ihlukaniswe ngu-2 futhi sithola: 12.5 / 2 = 6.25 ml no-6.25 / 2 = 3.125 ml, ngokulandelana. Lokhu kusho ukuthi ingane idinga ukunikezwa inani elilandelayo lomuthi:
I-5.3 ml yokumiswa okunokuhlushwa okungama-75 mg kathathu ngosuku njalo emahoreni ayi-8,
I-6.25 ml yokumiswa okugxilwe ku-200 mg kabili ngosuku ngemuva kwamahora ayi-12,
Ku-3.125 ml yokumiswa okugxilwa ku-400 mg kabili ngosuku ngemuva kwamahora ayi-12.
Ngokufanayo, umthamo wokumiswa ubalwa kunoma yiluphi udaba, kucatshangelwa isisindo somzimba wengane kanye nobunzima bokugula kwakhe.
Ngaphezu kwendlela echaziwe yokubala inani lokumiswa kwecala ngalinye elithile, ungasebenzisa imithamo eme emgqeni ehambelana nobudala kanye nesisindo somzimba. Le imithamo emele iboniswe etafuleni.
Iminyaka yengane Isisindo sengane Ukumiswa 125 / 31.25 (thatha umthamo okhonjisiwe amahlandla ama-3 ngosuku) Ukumiswa okungama-200 / 28,5 no-400/58 (thatha umthamo okhonjisiwe amahlandla ama-2 ngosuku)
Izinyanga ezi-3 - unyaka owodwa 2 - 5 kg 1.5 - 2,5 ml Ukumiswa okumisiwe kwe-1.5 - 2.5 ml 200 mg
6 - 9 kg 5 ml Ukumiswa okungu-5 ml 200 mg
1 - 5 iminyaka 10 - 18 kg 10 ml Ukumiswa okungu-5 ml 400 mg
6 - 9 ubudala 19 - 28 kg I-15 ml noma i-1 ithebhulethi 250 + 125 mg izikhathi ezintathu ngosuku I-7.5 ml yokumiswa okwesikhashana kwe-400 mg noma i-1 ithebhulethi ye-500 + 125 mg izikhathi ezi-3 ngosuku
Iminyaka eyi-10 kuye kweli-12 29 - 39 kg I-20 ml noma i-1 ithebhulethi 250 + 125 mg izikhathi ezi-3 ngosuku I-10 ml yokumiswa kwe-400 mg noma i-1 ithebhulethi ye-500 + 125 mg izikhathi ezi-3 ngosuku
Leli tafula lingasetshenziswa ukuthola ngokushesha umthamo wokumiswa kokugxila okuhlukahlukene kwezingane zeminyaka ehlukene nesisindo somzimba. Kodwa-ke, kunconyelwa ukubala imithamo ngawodwana, ngoba lokhu kunciphisa ubungozi bemiphumela emibi kanye nomthwalo ezinso nasezibindini zengane.
Amathebhulethi we-Augmentin - imiyalo esetshenzisiwe (ngokukhetha imithamo)
Amathebulethi kufanele asetshenziswe kungakapheli nenyanga ngemuva kokuvula iphakethe le-foil. Uma amaphilisi we-Augmentin ehlala ezinsukwini ezingama-30 ngemuva kokuvula le phakheji, kufanele alahlwe futhi angasebenzisi.
Amaphilisi we-Augmentin kufanele asetshenziselwe abantu abadala nezingane ngaphezulu kweminyaka eyi-12 enesisindo somzimba okungenani esingu-40 kg. Ukukhethwa komthamo wamathebulethi kunqunywa ngobunzima bokutheleleka futhi akuncike eminyakeni yobudala kanye nesisindo somzimba.
Ngakho-ke, ngezifo ezithambile nezilinganiselayo zanoma yikuphi ukwenziwa kwasendaweni, kunconywa ukuthatha ithebhulethi eyi-1 yezingu-250 + 125 mg izikhathi ezintathu ngosuku njalo ngamahora angama-8 ngezinsuku eziyisikhombisa kuya kweziyi-14.
Ekungeneni kwezifo ezinzima (kufaka phakathi izifo ezingapheli futhi ezihlala zenzeka ezithweni zezitho zangasese nokuphefumula), amaphilisi we-Augmentin kufanele athathwe kanjena:
Ithebhulethi engu-1 500 500 + 125 mg kathathu ngosuku njalo emahoreni ayi-8,
Ithebhulethi eli-1 le-875 + 125 mg izikhathi ezi-2 ngosuku njalo emahoreni ayi-12.
Ubunzima bokutheleleka bunqunywa ubulukhuni bento yokudakwa: uma ikhanda nekhanda lokushisa lingalingani (hhayi ngaphezulu kuka-38,5 o C), khona-ke lokhu ukutheleleka okuncane noma okulinganiselayo. Uma izinga lokushisa lomzimba linyuke ngaphezu kwama-38,5 o C, khona-ke lokhu yinkambo enkulu yokutheleleka.
Uma kwenzeka kunesidingo esiphuthumayo, amaphilisi angashintshwa ngokumiswa ngokuhambisana nokulandelana okulandelayo: Ithebhulethi eyi-875 + 125 mg ilingana no-11 ml yokumiswa okungu-400/58 mg. Ezinye izinketho zokubuyisa amaphilisi ngokumiswa zingenakwenziwa, ngoba imithamo ekuyo ngeke ilingane.
Kubantu asebekhulile, ukulungisa umthamo we-Augmentin akudingekile. Abantu abaphethwe yizifo zesibindi kufanele baqaphele ukusebenza komzimba, njengomsebenzi we-AsAT, AlAT, ALP, njll phakathi naso sonke isikhathi sokusetshenziswa kuka-Augmentin.
Ngaphambi kokuqala kokusebenzisa i-Augmentin, kufanele uqiniseke ukuthi umuntu akanazo izindlela zokulwa namagciwane ama-penicillin namaqembu e-cephalosporin. Uma ukusabela komzimba kwenzeka phakathi nokusetshenziswa kwe-Augmentin, khona-ke umuthi kufanele umiswe masinyane futhi ungabe usaphinde wasetshenziswa.
U-Augmentin akufanele asetshenziswe ezimweni ze-mononucleosis okusolwa ukuthi zingatheleleka.
Lapho uthatha i-Augmentin ngemithamo ephezulu, kufanele kudliwe okungenani amalitha ama-2 - 2,5 ngosuku ukuze inani elikhulu lamakristalu lingabi semchameni, ongakhipha urethra ngesikhathi uchama.
Lapho usebenzisa ukumiswa, qiniseka ukuxubha amazinyo akho izikhathi eziningana ngosuku ukuvimbela ukubola.
Ekwehlulekeni kwezinso ngokuqashelwa kwe-creatinine okungaphezu kwama-30 ml / min, i-Augmentin kufanele ithathwe kumithamo evamile yobudala bomuntu nesisindo. Uma imvume ye-creatinine yokulwa nokwehluleka kwe-renal ingaphansi kwama-30 ml / min, khona-ke kuphela izinhlobo ezilandelayo ze-Augmentin ezingathathwa:
Ukumiswa ngokufakwa kwe-125 / 31.25 mg,
Amaphilisi we-250 + 125 mg
I-500 + 125 mg amaphilisi
Isixazululo somjovo 500/100 no-1000/2006.
Imithamo yalezi zinhlobo ze-Augmentin yokusetshenziselwa ukwehluleka kwezinso nge-creatinine imvume engaphansi kwama-30 mg / ml ikhonjisiwe etafuleni.
Imvume ye-Creatinine Umthamo wokumiswa kwe-125 / 31.25 mg Umthamo wamathebulethi 250 + 125 mg no-500 + 125 mg Umthamo Wokujova Kwabantu Abadala Umthamo womjovo wezingane
I-10 - 30 mg / ml Thatha u-15 mg nge-1 kg yesisindo somzimba izikhathi ezi-2 ngosuku Ithebhulethi 1 izikhathi 2 ngosuku Isingeniso sokuqala i-1000/10, bese kuba ngu-500/12 amahlandla ama-2 ngosuku Faka ama-25 mg nge-1 kg yesisindo izikhathi 2 ngosuku
Ngaphansi kwe-10 mg / ml Ithebhulethi elilodwa kanye ngosuku Isingeniso sokuqala esingu-1000/20, bese kuba ngu-500/100 isikhathi esingu-1 ngosuku Faka ama-25 mg nge-1 kg yesisindo 1 isikhathi ngosuku
Ngokusebenzisa kanyekanye i-Augmentin kanye nama-anticoagulants angaqondile (iWarfarin, i-Thrombostop, njll.), I-INR kufanele iqashelwe, ngoba ingashintsha. Kulokhu, kuyadingeka ukulungisa umthamo wama-anticoagulants wesikhathi sokuphathwa kwawo ngasikhathi sinye ne-Augmentin.
I-Probenecid iholela ekwandeni kokuhlushwa kwe-Augmentin egazini. I-Allopurinol ngenkathi ithatha i-Augmentin yandisa ubungozi bokuqalwa kwesikhumba.
I-Augmentin inyusa ubuthi be-methotrexate futhi inciphise ukusebenza kwezindlela zokuvimbela inzalo zomlomo ezihlanganisiwe. Ngakho-ke, ngokumelene nesizinda sokusetshenziswa kwe-Augmentin, izindlela ezingeziwe zokuvimbela inzalo kufanele zisetshenziswe.
Ngokuya ngethamo lamakhompiyutha asebenzayo, umuthi unqunyelwe izingane ezingaphezulu kweminyaka engu-12 ubudala ngale ndlela elandelayo:
Amoxicillin kanye nomthamo we-clavulanic acid Ungayithatha kanjani
250mg + 125mg Ithebhulethi le-1 kathathu ngosuku uma ubudisi bokutheleleka buthambile noma busesilinganisweni
500mg + 125mg Ithebhulethi eli-1 njalo emahoreni ayi-8, i.e. kathathu ngosuku
875mg + 125mg Ithebhulethi eyi-1 ngokuphumula kwamahora ayi-12, okungukuthi, kabili ngosuku
Uma izincomo zokusetshenziswa zingalandelwanga, i-Augmentin ngethamo eliphakeme ngokweqile lithinta kabi ipheshana lesisu futhi ingaphazamisa ukulingana kukasawoti wamanzi emzimbeni wezingane. Umuthi ubuye ucasule i-crystalluria, othinta kabi umsebenzi wezinso. Ngokwe-overdose ezinganeni ezihluleka yizinso, ukwehluleka kungenzeka.
Uma unika amaphilisi kanye nama-laxatives noma ama-antacid, lokhu kuzokhulisa ukumuncwa kwe-Augmentin.
Isidakamizwa asinconywa ukuhlanganiswa nama-bacteriostatic antibiotic, ngokwesibonelo, nezidakamizwa ze-tetracycline noma ama-macrolides. Banomphumela wokuphikisana.
Umuthi awusetshenziswanga ndawonye ne-methotrexate (ubuthi bayo banda) noma i-allopurinol (ingozi yokwanda kokungezwani kwesikhumba).
Uma unikeza kanye nale anticoagulants ye-antibiotic engaqondile, umphumela wabo wokwelapha uyanda.
Gcina ekhaya lifomu eliqinile le-Augmentin elulekwe emazingeni okushisa angaphansi kwe + 250C. Ukulondolozwa kwalo muthi, indawo eyomile ifaneleka kahle lapho umuthi ungatholi ingane encane. Impilo yeshalofu yamathebhulethi i-500mg + 125mg yiminyaka emi-3, kanti umuthi oneminye imithamo iminyaka emi-2.
Ezimweni eziningi, abazali baphendula kahle ngokusetshenziswa kwe-Augmentin ezinganeni, baphawula ukuthi isidakamizwa esinjalo sisebenza ngokushesha ngokwanele futhi silwa nokutheleleka kwamagciwane ngempumelelo. Uma kuqhathaniswa nokubuyekezwa, imiphumela emibi ayiveli lapho uyithatha. Phakathi kwabo, ukusabela okungekuhle komgudu wokugaya ukudla ngokuvamile kuyaphawulwa.
Ukushintsha ifomu eliqinile le-Augmentin, amanye ama-ejenti anokwakheka okufanayo kwezinto ezingasetshenziswa, isibonelo:
Cishe yonke le mishanguzo ivezwa ifomu lethebhulethi, kepha eminye iyatholakala ekumisweni. Ngaphezu kwalokho enye i-penicillin antibiotic noma i-cephalosporin (Suprax, Amosin, Pantsef, Ecobol, Hikontsil) ingasebenza esikhundleni sika-Augmentin. Kodwa-ke, i-analogue enjalo kufanele ikhethwe kanye nodokotela, kanye nangemva kokuhlaziywa kokuzwela kwe-pathogen.
U-Augmentin - ama-analogues
Imakethi yemithi inezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zamagama ka-Augmentin, aqukethe i-amooticillin ne-clavulanic acid njengezakhi ezisebenzayo. Le mishanguzo izithonjana ezibizwa ngama-analogues of the ntho esebenzayo.
Izidakamizwa ezilandelayo zidluliselwa kuzifanekiselo ezinjalo ze-Augmentin njengezithako ezisebenzayo:
I-Amovikomb powder yesisombululo somjovo,
I-Amoxivan powder yesisombululo somjovo,
Amathebhulethi e-Amoxiclav kanye ne-powders ukulungiselela umjovo nokumiswa kokuphathwa ngomlomo,
Amathebulethi we-Amoxiclav Quiktab
I-Amoxicillin + i-Clavulanic acid powder yesisombululo somjovo,
I-Verklav powder yesisombululo somjovo,
I-Clamosar powder yesisombululo somjovo,
I-Lyclav powder yesisombululo somjovo,
Amathebhulethi e-Medoclave kanye ne-powders yokulungiselela ukumiswa kokuphathwa komlomo kanye nesisombululo somjovo,
I-Panclav 2X amaphilisi kanye ne-powder yokumiswa komlomo,
I-Fibell powder yesisombululo somjovo,
Amaphilisi weFlemoklav Solutab,
I-Foraclav powder yesisombululo somjovo,
Amacwecwe we-ecoclave kanye ne-powder yesisombululo somlomo.
Ukubuyekezwa mayelana ne-Augmentin
Cishe i-80 - 85% yokubuyekezwa kwe-Augmentin inhle, kungenxa yokusebenza kahle komuthi ekwelapheni ukutheleleka kubantu. Cishe kuzo zonke izibuyekezo, abantu bakhombisa ukusebenza kahle komuthi, ngenxa yokuthi kukhona ikhambi elisheshayo lesifo esithathelwanayo. Kodwa-ke, kanye nesitatimende sokusebenza ngempumelelo kwe-Augmentin, abantu bakhombisa ubukhona bemiphumela emibi ebingathandeki noma ibekezelelwe kabi. Kwakuwukubakhona kwemiphumela emibi eyayiyisisekelo sokusala okungu-15 - 20% wokubuyekezwa okungekuhle okusele yize kusebenza komuthi.